Izinhlobo Ezi-13 Zemikhankaso Ye-imeyili Okucutshungulwe Okufanele Uyisebenzise | Martech Zone
Izinhlobo Ezi-13 Zemikhankaso Ye-imeyili Okucutshungulwe Okufanele Uyisebenzise
NgoLwesibili, Okthoba 19, 2021 NgoLwesithathu, Okthoba 20, 2021 Douglas Karr
Ngokusebenza nabathengisi be-imeyili abaningana, ngihlale ngimangazwa ukungabi bikho kwangaphambi kokuklanywa, okusebenzayo kwaqala imikhankaso ye-imeyili ngaphakathi kwama-akhawunti lapho kwenziwa. Uma uyipulatifomu efunda lokhu - kufanele ube nayo le mikhankaso isilungele ukuya kusistimu yakho. Uma ungumthengisi we-imeyili, kufanele ngabe usebenza ukufaka izinhlobo eziningi zama-imeyili aqalisiwe ngangokunokwenzeka ukwandisa ukubandakanyeka, ukutholwa, ukugcinwa kanye namathuba we-upsell.
Abathengisi abangasebenzisi imikhankaso ye-imeyili ebangelwe manje balahlekelwa kakhulu. Ngenkathi ama-imeyili aqalayo ekhula ekwamukelweni, iningi labakhangisi abalisebenzisi leli qhinga elilula.
Ayini ama-imeyili athuthukisiwe?
Ama-imeyili aqalisiwe ngama-imeyili aqalwa ngokuziphatha kwalowo obhalisile, iphrofayili, noma izintandokazi. Lokhu kwehlukile kumikhankaso ejwayelekile, yemilayezo eminingi eyenziwa ngosuku oluchazwe ngaphambilini noma ngesikhathi ngumkhiqizo.
Ngoba imikhankaso ye-imeyili edalekile ibhekiswe ekuziphatheni futhi ibekelwe isikhathi lapho obhalisile ebalindele, bathola imiphumela ephezulu uma kuqhathaniswa nebhizinisi njengemikhankaso ejwayelekile ye-imeyili efana nezincwadi zezindaba. Ngokuvumelana ne Imibiko ye-Blueshift Benchmark Ekukhangisweni Kwe-imeyili Okukhiqizwayo:
Ngokwesilinganiso, ama-imeyili adaliwe yi- 497% kusebenza kangcono kunama-imeyili wokuqhuma. Lokhu kuqhutshwa yi 468% izinga lokuchofoza eliphakeme, kanye no 525% izinga lokuguqulwa eliphakeme.
Ngokwesilinganiso, imikhankaso ye-imeyili esebenzisa isikhathi sokuzibandakanya iyi- 157% kusebenza ngempumelelo kunama-imeyili angahlelwanga ngesikhathi angahlanganyeli. Lokhu kuqhutshwa yi 81% izinga lokuchofoza eliphakeme, kanye no 234% izinga lokuguqulwa eliphakeme.
Ngokwesilinganiso, imikhankaso ye-imeyili esebenzisa izincomo yilezi 116% isebenza kangcono kunemikhankaso yeqoqo ngaphandle kwezincomo. Lokhu kuqhutshwa yi 22% izinga lokuchofoza eliphakeme, kanye no 209% izinga lokuguqulwa eliphakeme.
IBlueshift ihlaziye imiyalezo eyizigidi eziyizinkulungwane eziyi-14.9 kuyo yonke i-imeyili nezaziso zohlelo lokusebenza lweselula ezithunyelwe ngamakhasimende we-Blueshift. Bahlaziye le datha ukuze baqonde ukwehluka kwamamethrikhi wokuzibandakanya asemqoka kufaka phakathi amanani wokuchofoza namazinga okuguqula phakathi kwezinhlobo ezahlukahlukene zokuxhumana. Idathasethi yabo ebhentshini limelela ama-vertical vertical angaphezu kwe-12 afaka i-eCommerce, ezezimali zabathengi, ezeMpilo, ezeMidiya, ezeMfundo, nokuningi.
Izigaba ezibanzi zemikhankaso ye-imeyili edalekile ziwela ngaphansi komjikelezo wempilo, ukuthengiselana, ukumaketha kabusha, umjikelezo wempilo yamakhasimende, kanye nezimbangela zesikhathi sangempela. Ngokuqondile, imikhankaso ye-imeyili ebangelwe ifaka phakathi:
Siyakwamukela imeyili - Lesi yisikhathi sokusetha ubudlelwano, futhi unikeze umhlahlandlela wokuziphatha ofisa ukusungula.
Ama-imeyili Wokugibela - Kwesinye isikhathi ababhalisile bakho badinga i- Phusha ukubasiza ukusetha i-akhawunti yabo noma ukuqala ukusebenzisa ipulatifomu yakho noma isitolo.
Ukwenza kusebenze ekuqaleni - Ababhalisile abasebenza kodwa abangazange bahlanganyele ngokushesha bangahehwa ukuba benze kanjalo ngalawa ma-imeyili.
Ukwenza kusebenze kabusha i-imeyili - Bhalisa kabusha ababhalisile abangaphendulanga noma abachofoze ngaphakathi komjikelezo wakho wokuthenga.
Ukumaketha kabusha i-imeyili - Imikhankaso yenqola yokuthenga elahliwe iyaqhubeka nokuqhuba ukuguqulwa okuningi kwabathengisi be-imeyili, ikakhulukazi esikhaleni se-e-commerce.
I-imeyili Yokuxhumana - Imiyalezo yesevisi ingamathuba amahle okufundisa amathemba akho namakhasimende futhi ubanikeze amanye amathuba okuzibandakanya. Kufakwe i-e-risidi, iziqinisekiso zokuthenga, ama-oda abuyiselwe emuva, ukuqinisekiswa kwe-oda, ukuqinisekiswa kokuthumela nokuthumela noma ukubuyisa izimbangela ze-imeyili.
Iqalisa kabusha i-imeyili - Ukuthumela isaziso kumakhasimende lapho uhlu lwezimpahla lubuyele esitokisini kuyindlela enhle yokukhulisa ukuguqulwa futhi ubuyisele ikhasimende kusayithi lakho.
I-akhawunti ye-akhawunti - Izaziso kubathengi bezinguquko ku-akhawunti yabo, njengokubuyekezwa kwephasiwedi, izinguquko ku-imeyili, izinguquko zephrofayili, njll.
I-imeyili Yomcimbi Wakho - Usuku lokuzalwa, usuku lokugubha usuku lokuzalwa, nezinye izigigaba zomuntu siqu ezinganikeza izinhlinzeko ezikhethekile noma ukuzibandakanya.
I-imeyili Yokuziphatha - Uma ikhasimende libandakanyeka ngokomzimba noma ngokwamadijithi ngomkhiqizo wakho, ukuthwebula umlayezo we-imeyili owenziwe waba ngowakho futhi ungasiza ukusheshisa uhambo lokuthenga. Isibonelo, uma ikhasimende lidlulisa amehlo kusayithi lakho bese lishiya… ungahle ufise ukuhlinzeka nge-imeyili yezincomo zomkhiqizo enikezela okunikezwayo noma imininingwane eyengeziwe ebayenga ukuba babuye.
I-imeyili Ebalulekile - Imilayezo yokuhalalisela yababhalisile efinyelele ingqophamlando ethile ngomkhiqizo wakho.
Izimbangela zesikhathi sangempela - Isimo sezulu, indawo, nezimbangela ezisuselwa kumcimbi ukuzibandakanya ngokujulile ngamathemba akho noma amakhasimende.
Inhlolovo imeyili - Ngemuva kokuthi i-oda noma iphrojekthi isiqediwe, ukuthumela i-imeyili ukubuza ukuthi inkampani yakho yenze kanjani kuyindlela enhle yokuqoqa impendulo emangalisayo ngemikhiqizo yakho, izinsizakalo nezinqubo zakho. Lokhu kungalandelwa futhi nge-imeyili yokubuyekeza lapho ucela ukubuyekezwa kumakhasimende akho ukuze wabelane ngakho kumikhombandlela nokubuyekezwa kwamasayithi.
Ucwaningo luqinisekisa ukuthi abathengisi bazozuza ekusebenzeni imikhankaso ebanzi futhi ehlanganisiwe ezidonsela enhlanganisweni yezimbangela zokuzibandakanya kangcono nokuguqula amakhasimende. Abathengisi bangazithola behlaziya amasu abo omkhankaso wokuqalisa ngesikhathi sonyaka sokuthenga emuva esikoleni nangaphambi kwenkathi yokuthenga ngamaholide.
Buka umbiko weBlueshift's Trigger-based Marketing Benchmark Report
Tags: inani le-oda elijwayelekilei-imeyili yoku-oda emuvaukuqinisekiswa kwe-imeyiliimeyili Marketingizenzakaloukuphinda usebenzei-imeyili yokwenza kusebenze kabushaukumaketha kabushaukumaketha kabusha i-imeyilibuyisela i-imeyili yokubuyiselwa imaliukuthumela i-imeyili yokuqinisekisaokwenziwayoi-imeyili yokuthengiselanaqalisaqalisa imicimbikubangele i-imeyilikwaqala umkhankaso we-imeyilikubangele izinhlobo ze-imeyiliwamukelekileukwamukela i-imeyiliYeboyebo ukumaketha impilo
Izindlela ezi-5 Ukulalela Komphakathi Kwakha Ukwaziswa Komkhiqizo Ofuna Ngempela
Amafomula we-Excel Wokuhlanzwa Kwedatha Ejwayelekile